တိုက်ခန်း - တိုက်သစ်အရောင်း Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: တိုက်သစ်အရောင်း
🏡မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဘေလီတံတားအဆင်း နေရာကောင်းကာင်း ပင်လုံလမ်းမကြီးတည့်ပေါက်တိုက်အသစ်လေးရောင်းပါမယ်ဗျာ 💰💰💰 သိန်း...3650 ညှိနှိုင်း 💷ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၀ယ်ယူနိုင်သည် 👉(34) သစ်တောရပ်ကွက်၊ဘေလီတံတားအနီး ပင်လုံလမ်းမကြီးအနီး ( 40 × 60 ) ပေကျယ် 👉2 RC 👉3 MasterBedrooms,1 SingleBedroom Bath Tub ,4 Aircons တစ်အိမ်လုံးပစ္စည်းကောင်းရေစိုခံ Vinyl များခင်းပြီး တစ်အိမ်လုံးလိုက်ကာများတပ်ဆင်ထားပြီး မီးဖိုခန်း / ရေချိုးခန်း / အိမ်သာကြွေခင်းကပ် ဘလိတ်ဆူးကြိုး2ထပ်, ခြင်လုံဇကာ ပါပြီး လူမနေရသေးသောတိုက်သစ် ခြံထဲကား3စီးခန့်ရပ်နိုင်သည် ဂရန်မြေ ( အမည်ပေါက် ) အနောက်ဖက်လှည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ⬇⬇⬇ ☎☎☎ 09 799017250( viber) data ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင် ဖုန်းဆက်ပေးပါခင်ဗျာ 🌟Page တွင် မတင်ထားသော ကွန်ဒို.တိုက်ခန်း.လုံးချင်း. Data များစွာရှိသောကြောင့်... Myanmar Property အိမ်ခြံမြေ သို့. ဖုန်းဖြင့်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ လူကြီးမင်းတို့၏အိမ်ခြံမြေ ရောင်း.ဝယ်.ငှား ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကိုလည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံနိုင်ပါ တယ်ခင်ဗျာ။
အရွယ်အစား 990.00 စတုရန်းပေ
အရွယ်အစား 702.00 စတုရန်းပေ